Hiran State - News: HS:- Kooxda Ahalusuna oo aan wal,i darensaneyn in dalku yeeshey dowlad rasmia ah
HS:- Kooxda Ahalusuna oo aan wal,i darensaneyn in dalku yeeshey dowlad rasmia ah
HS:- Tan iyo markii ay bulshada Soomaaliyeed heleen dowlad rasmi ah waxaa gabi ahaan isku dhac yaacay siyaasadii kooxda xukun doonka ah ee Ahalusuna.
Hadaba waa maxay ujeedada ka danbeeysay ee loo abuuray Ahalusuna yaase ka danbeeyey dhismaha kooxdaan?
Ahalusuna magac ahaan waa magac qurux badan waxana ku abtirsada qofkasta oo rumeysan Allaah subxaanahu watacaalaa iyo Nabi Mohamed NNKH dhamaane dadku marba hadey Islaam yahiin waa Ahalusuna. laakinse marka si fiican loo qeexo kooxda magacan isticmaasha ee ka dhisan qeybo ka tirsan dalka Soomaaliya waxey ku yimaadeen qaab yaab leh kadib markii dhismahii kooxdaan sida la rumeysan yahay abaabulay R/wasaarahii geeriyooday ee Ethiopia xili ay dowlada Ethiopia ku beer laxawsaneysay in ay iska celiyaan Shabaab oo markaas ugaarsi xoogan ku heysay jameecada Ahalusunada Soomaaliya.
Kooxda ayaa waxaa ku midoobay labo beelood oo isku ujeedo ah iyagoona saldhiyo ka sameystay Gedo iyo Galgaduud ilaa ay markii danbe ka farcameen koox kale oo fadhigoodu yahay Mogdishu oo shirar dibadaha u raaci jiray madaxweynahii hore ee Soomaaliya Shiikh Shariif.
Waxii ka danbeeyey geeridii R/wasaarahii Ethiopia waxaa kooxda ku dhacay jahwareer siyaasadeed oo siweyn looga dareemayo degaanada ay maamulaan iyagoo mudo 90 maalmood gudahood war saxaafadeed kaladuwan oo dhamaantood u muuqaal eg in kaliya afka laga sheegayo laakisne uusan jirin wax ficil hawada u marinayey bulshada.
1- Waxey bishii la soo dhaafay sheegeen iney maamul goboleed u sameynayaan Galgaduud, Hiiraan iyo Sh/dhexe arintaasi iska daa ficile meeshii lagu yiri lagama soo qaadin.
2- Xili uu wadanka Soomaaliya yeeshey dowlad rasmi ah waxey shir jaraa'id ku sheegeen in r/wasaaraha cusub laga keeno kooxdooda malaha sida dad badan aaminsan yahiin waxey moodaan in wali noolyahay ninkii dhisay kooxda dalka Soomaaliyana ay wali ka shaqeyn doonaan kooxo siyaasaded hubeysan oo waliba xukun doon ah.
3- Shirkoodii ugu danbeeyey waxuu fikirkoodu ku soo aruuray hal maamul ayaanu u sameyneynaa gobolka Galgaduud oo meelaha qaarkood markaad joogto dalka Soomaaliya loogu yeero Kashmiirka Soomaaliya maadaama beelaha H Gidir, Dir , Mariixaan iyo Murusade ninba qeybtii uu ka deganaa gobolkaas si iskiis ah isku maamulo taasi oo ka dhigtay inuu gobolkaas noqdo gobolka ugu maamulada badan dalka Soomaaliya.
Dad badan ayaa siweyn u qiyaasayey marba hadii la helay dowlad rasmi ah in dhegaha bulshada aysan maqli doonin kooxaha Ahalusuna oo kale ah ee xukunka ugu sareeya ku raadinaya qoray caaradii xili saaxiibadood Shabaab dalka dhan laga sifeynayo.
Hadaba isku day badan oo aanu kula xariirnay horjoogayaasha Ahalusuna ee Gedo, Galgaduud iyo Mogdishu ayaanu ku ogaanay in aysanba jirin hadaf guud oo ka dhaxeeya kooxda bal siweyn dhawaan u dhuux shaqisyaad aanu siyaabo kala duwan ugu soo aruurinay waxa ay kooxda ka aaminsan yahiin iyo sida aysan iskaka warqabin oo midkasta sida uu jecel yahay iskaka hadlayo.
Madaxweynaha Jamhuuriyada Federalka Soomaaliya howl culus ayaa sugeysa isaga iyo wasiirkiisa 1aad iyo xukumada la soo dhisi doono.
· admin on September 14 2012 14:30:36 · 0 Comments · 1748 Reads ·
14,568,427 unique visits